साताको शेयर बजारः ३८ अर्बको कारोबार - सहकार्य मिडिया सहकार्य मिडिया अर्थ
२ आश्विन २०७८, शनिबार १०:४७ Amit Neupane	0 Comments
साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भयो । त्यस दिन नेप्से ७१।४३ अङ्कले बढेर दुई हजार ९४७।४२ मा पुग्यो । ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक ‘सेन्सेटिभ इन्डेक्स’ १३।०३ विन्दुले बढेर ५४८।२९ मा पुग्यो । कूल २३१ कम्पनीको एक करोड ७१ लाख ३३३ कित्ता शेयर रु नौ अर्ब ४४ करोड ३५ हजार २४४ मूल्यमा खरिद–बिक्री भए । कारोबार भएका १३ उपसमूहमध्ये सामूहिक लगानी कोषको मात्रै ०।०५ विन्दुले ओरालो लाग्यो भने १२ उपसमूहको शेयर उकालो लागेको थियो । त्यस दिन कारोबारका आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रही रु ७३ करोड ७७ लाख आठ हजार ६८५ बराबरको खरिद बिक्री भयो । आइतबार विभिन्न नौ कम्पनीका शेयरमा सर्किट लाग्यो ।
साताको दोस्रो दिन नेप्सेमा झिनो अङ्कको वृद्धि भयो । त्यस दिन नेप्से परिसूचक ०।२७ विन्दुले उकालो लागेर दुई हजार ९४७।६९ मा पुग्यो । ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने ‘सेन्सेटिभ इन्डेक्स’ ०।५५ विन्दुले बढेर ५४८।८७ मा पुग्यो । कूल २२६ कम्पनीको एक करोड ५६ लाख ८१ हजार १८४ कित्ता शेयर रु नौ अर्ब २९ करोड पाँच लाख ५४ हजार १५५ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । सोमबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ४१ खर्ब २५ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख ४० हजार बराबर पुग्यो ।
साताको तेस्रो दिन नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखियो । नेप्से परिसूचक १८।५४ विन्दुले ओरालो लागेर दुई हजार ९२९।२८ मा ओर्लियो । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक ३।२१ विन्दुले ओरालो लागेर ५४५।६६ मा पुग्यो । नेप्सेसँगै कारोबार रकमसमेत घट्न पुग्यो । कूल २२२ कम्पनीको एक करोड छ लाख ३९ हजार ८२६ कित्ता शेयर रु पाँच अर्ब १९ करोड ५२ लाख ९५ हजार ४४३ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । मङ्गलबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ४० खर्ब ९९ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ४० हजारको हाराहारीमा रहेको थियो ।
त्यस दिन कारोबार भएका १३ वटै उपसमूहको शेयरसमेत ओरालो लाग्यो । कारोबारका आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर शीर्ष स्थानमा रही रु २७ करोड तीन लाख ७० हजार ५२४ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भयो । साताको चौथो दिन बुधबार नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट देखियो । त्यस दिन नेप्से ४०।२६ अङ्कले घटेर दुई हजार ८८९।०३ मा ओर्लियो । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ७।१६ विन्दुले घटेर ५३८।५० मा सीमित भयो । नेप्सेको ओरालो यात्रासँगै कारोबार रकमसमेत रु पाँच अर्बमा सीमित भयो । कूल २२२ कम्पनीको एक करोड पाँच लाख ५७ हजार ८६६ कित्ता शेयर रु पाँच अर्ब ३५ करोड ८० लाख ९७ हजार २५१ मूल्यमा खरिद बिक्री भए ।
बुधबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ४० खर्ब ४३ अर्ब १८ करोड ९७ लाख ५० हजार बराबर रहन पुग्यो । कारोबार भएका १३ वटै उपसमूहको शेयर ओरालो लाग्न पुग्यो । शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्सेमा पहिरो लाग्यो तर कारोबार नौ अर्बमाथि रह्यो । त्यस दिन नेप्से परिसूचक ७६।६५ विन्दुले ओरालो लागेर दुई हजार ८१२।३८ मा ओर्लियो । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १२।७३ अङ्कले घटेर ५२५।७८ मा सीमित भयो ।
← नेपाल सितोरियो कराते संघ काभ्रेले भब्यताका साथ सम्पन्न गर्‍यो रक्त दान कार्यक्रम
सिड नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारीको साधारण सभा भब्यताका साथ सम्पन्न, को को भए निर्वाचीत (सुचीसहित) →
विद्यार्थी खोज्दै विद्यालय २ आश्विन २०७८, शनिबार १०:४७
सहकर्मीबाटै अप्ठेरोमा प्रधानन्यायाधीश २ आश्विन २०७८, शनिबार १०:४७
विश्वासको मत सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन, प्रदेशसभा बैठक १५ गतेसम्मका लागि स्थगित २ आश्विन २०७८, शनिबार १०:४७
भीम रावललाई निरन्तर धक्का, एमालेमा टिक्लान् ? २ आश्विन २०७८, शनिबार १०:४७
एमाले छाडेका बामदेव कता ? २ आश्विन २०७८, शनिबार १०:४७
वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउँदा सङ्कटमा सहकारी २ आश्विन २०७८, शनिबार १०:४७
एमालेका करिब ६ हजार वडा कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न २ आश्विन २०७८, शनिबार १०:४७